Ubuntu 19.10 Release Party - Mandalay | Ubuntu LoCo Team Portal
Ubuntu 19.10 Release Party - Mandalay
Thu, 21 Nov. 2019 13:00 - 17:00 +0630
ဧပြီလနှင့် အောက်တိုဘာလတို့တွင် အသစ်ထုတ်ဝေလေ့ ရှိတဲ့ Ubuntu တိုင်းကို ကမ္ဘာ တဝမ်းရှိ Ubuntu user များမှ စုပေါင်း၍ Release Party ကျင်းပလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒီနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်နေ့ ထုတ်ဝေမှာကတော့ Code name >> Eoan Ermine << လို့ခေါ်ပါတယ်။ Desktop Version ကို ၉လ အထိ အထောက်အပံ့ပေးလေ့ရှိပါတယ်။
ယခု ထွက်ရှိလာတဲ့ version အသစ်မှာ ဘယ်လို features တွေပါလာမလဲ? ဘယ်လိုအပြောင်းအလဲ လေးတွေ တွေ့ရမလဲ? ဆိုတာကို Ubuntu Myanmar LoCo team နှင် အတူ ဆွေးနွေး ဖို့ Ubuntu 19.10 Release Party သို့ဖိတ်ခေါ် လိုက်ပါတယ်။
မိမိတို့ရဲ့ Laptop တွေကို ယူဆောင်လာပြီး Ubuntu 19.10 (Eoan Ermine) နောက်ဆုံးထုတ် Version ကို ထည့်သွင်းနိုင်ပါမယ်။ထို့အပြင် system engineering, security, DecOps,Containerization တို့နှင့် သက်ဆိုင်သော ဆွေးနွေးမှူများ နှင့် အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ workshop များလဲ ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲ တတ်ရောက်လိုသူများ အောက်ပါလင့်တွင် registration ပြုလုပ်ပေးပါ။
location >> မြဝတီမင်းကြီးလမ်းမပေါ်၊ ၆၈လမ်း နှင့် ၆ရလမ်းကြား၊ လမ်းသွယ် ၁၉ ထိပ်၊ မန္တလေးမြို့။
09 - 9574 00001
09 - 9574 00002
Near Mandalay-Larshio Railway
Sponsor by ATeam & Silent Dimension
W3FH+JV Mandalay , Mandalay